यात्रु लिएर गुडिरहेको अटोमाथि जब बाघले आक्र`मण गरेपछि ! – Nepali in Australia
April 6, 2021 autherLeaveaComment on यात्रु लिएर गुडिरहेको अटोमाथि जब बाघले आक्र`मण गरेपछि !
पर्सा – यात्रु बोकेर गुडिरहेको सवारी साधनमा बाघ जाइ लागे के होला? त्यसमा सवार यात्रुको अवस्था झन के होला? यस्तै घटना पर्सामा भएको छ। त्यहाँको वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडकखण्ड अन्तर्गत ठोरीको शिकारी बासमा गुडीरहेको अटो रिक्सामाथि बाघ जाई लागेको छ।
उक्त अटो रिक्सा ठोरी गाउँपालिका २ चोकबजारबाट बिजयबस्तीतर्फ जाँदै गरेको थियो । ना २ ह ६२९० नम्बरको अटोमाथि शनिबार साँझ ७ः३० बजे बाघ जाई लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी निरीक्षक अशोक साहले जानकारी दिएका छन्।
‘चालकसहित तीन जना सवार अटोमाथि बाघले एक्कासी आ’क्रमण गरेको रहेछ,’ साहले भने, ‘बाघ जाई लागेपछि अटो अनियन्त्रित भई पल्टिन पुगेको रहेछ।’
तर राम्रो पक्ष अटोमा सवार यात्रुलाई बाघले केही गरेन । अटो र यात्रुलाई त्यस्तै अवस्थामा छोडेर बाघ भने भारतको जंगलतर्फ छिरेका कारण कुनै मानवीय क्षति भने हुन भने पाएन ।
दुर्घटनामा अटोरिक्साको अगाडिको भागको सि सा फु टे को, छत कु च्चि ए को प्रहरी निरीक्षक साहले जानकारी दिएका छन् । सोही क्रममा पूर्वतर्फबाट आइरहेको आफ्नो गस्ती टोलीले दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरुको उ`द्दार गरेको उनले बताए।
स्थानीय अटो सञ्चालक समेत रहेका बुद्धिबहादुर गुरुङका अनुसार अटो दुर्घटना हुन पुग्दा अटोचालकलाई सामान्य चोट लागेको छ।